Salesforce.com anaghị arụ ọrụ na Internet Explorer 7 (Ọ na - eme n'ezie!) | Martech Zone
M banyere Salesforce.com n'ụtụtụ a na IE7 ma enweghị m ike ịhụ bọtịnụ ọ bụla iji mezuo iwu ọ bụla. Ndị na - agba ọsọ na - apụ apụ ogologo oge na Internet Explorer 7… enweghị ihe ngọpụ na On Demand / Software dị ka ndị na-eweta ọrụ adịghị njikere maka nke a.
Ọbụna nke ka njọ bụ ozi ogbi na nkwado ha. Ha na-atụ aro ka ị ghara ozugbo nweta nkwalite na IE7 mgbe ọ ghọrọ Akpaaka Mmelite. Ummmm, o buru na ihe aUTOMATIC melite… kedu ka ị ghara ozugbo nweta nkwalite? Oy.
NTORKỌ: Ọ bụrụ na i kpochapụ ebe nchekwa gị, ọ ga-arụ ọrụ.
Ọkt 19, 2006 na 12:22 PM
Otu ihe ọzọ kpatara onye ọ bụla na-eji ire ere kwesiri iji Firefox, mana m ghọtara na maka ọtụtụ ụlọ ọrụ buru ibu nke a agaghị abụ nhọrọ.
Ọkt 19, 2006 na 2:57 PM
Salesforce.com doziri nsogbu bọtịnụ azụ na Machị.
Ọ bụrụ na ị gbanwere ntọala IE6 cache gị site na ndabara (Na akpaghị aka) ma ị kwaliterịrị na IE7, IE6 CSS nwere ike ịchekwa.
Gbalịa ịbanye na hiting Ctrl-F5 maka izu ike zuru ezu. Ma ọ bụ kpochapụ oghere ma banye ọzọ. Ma ọ bụ chere 24 awa. Ano m na akwukwo IE7 ohuru weputara ma ihu mkpọchi di nma.
Ọzọkwa, ị nwere ike gbanyụọ mmelite akpaaka. Microsoft kpuchiri nke a na blog buo (http://blogs.msdn.com/ie/default.aspx) na ebe a (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4516A6F7-5D44-482B-9DBD-869B4A90159C&displaylang=en)
Ọkt 19, 2006 na 7:28 PM
Daalụ, KT! Saved zọpụta ụbọchị!